Otu Kingoro: Ụzọ mgbanwe nke nrụpụta omenala （akụkụ 2） | Kingoro
Otu Kingoro: Ụzọ mgbanwe nke nrụpụta omenala (akụkụ 2)
Onye njikwa oge: Ọ nwere onye nwere atụmatụ njikwa ka mma maka ụlọ ọrụ ahụ?
Maazị Sun: Mgbe anyị na -agbanwe ụlọ ọrụ, anyị doziri ihe nlereanya ahụ, nke a na -akpọ fission entrepreneurial model. Na 2006, anyị webatara onye nwe obodo mbụ. Enwere mmadụ ise na isii na ụlọ ọrụ Fengyuan bụ ndị zutere ọnọdụ n'oge ahụ, mana ndị nke ọzọ achọghị itinye aka. O zuru ezu ịrụ ọrụ nke m. Ọrụ afọ. N'oge ahụ, arụmọrụ ahụ ji nwayọọ nwayọọ na -arị elu, uru ya na -arịwanye elu. N'ile ndị ọzọ anya, m kwara ụta na anaghị m azụ ahịa n'oge ahụ. Mgbe e hiwere Shandong Kingoro, enwere ndị isi asaa dị elu bụ ndị zụtara oke na ụlọ ọrụ ahụ. Afọ mbụ na -efu ego. Ọrụ a ga -efunahụ ego n'afọ mbụ, ma etinye ya n'ahịa, ego, ego, nyocha na mmepe, gụnyere ire ahịa, ma ọ bụ arụmọrụ ahịa. Mana n'afọ na -abịa, ahụrụ m ọrụ ị nweta ego nke etiti, nke dịkwa na ngwụcha afọ 2014 na mbido 2015, mgbe ọ ritere uru ruru nde RMB abụọ, n'ihi na itinye ego ụlọ ọrụ ahụ bụ nde RMB nde 3.4 n'oge ahụ.
Onye njikwa ya: Ọnụego nloghachi maka uru nde abụọ dị oke elu.
Maazị Sun: Ee. Yabụ n'oge ahụ, ọtụtụ mmadụ nwere ọmarịcha ọmarịcha mgbe ha hụrụ ihe nlereanya a ma chọọ isonye. Oge ntozu oke ruru na 2018, mgbe etinyere Qiao Yuan Intelligent Technology Co., Ltd. N'oge ahụ, enwere ndị isi njikwa 38, ndị njikwa etiti, ọkpụkpụ azụ na ndị isi otu. Ya mere, anyị bụ usoro mmepe niile. Nke mbụ bụ iji nwayọọ nwayọọ kwalite usoro ngwaahịa a site na nzọ ụkwụ, mgbe ahụ, ụdị njikwa ahụ na -ejikọkwa nwayọ nwayọ, ya bụ, otu obi bụ otu.
Onye njikwa ya: Na mgbakwunye na ọnọdụ njikwa ị kpọtụrụ aha ugbu a, amụtara m na enwere njikwa ọzọ a na -akpọ mode management management. Kedu ụdị ọnọdụ a bụ? Ị nwere ike iwebata ya ọzọ.
Maazị Sun: Ọ bụ ịhazigharị ụfọdụ ihe ndị mbụ gbasasịrị. Mgbe mbụ anyị mere ya na 2015, anyị webatara njikwa 5S na saịtị ahụ n'oge ahụ. Kedu ihe njikwa 5S dị na saịtị kwuru bụ iji melite arụmọrụ saịtị, belata ihe ọghọm, ma melite nchekwa. Nke ahụ bụ echiche n'oge ahụ. Otu nnukwu nsogbu a na -ezute bụ na onye ahịa chọrọ ka oge nnyefe ya dị mkpụmkpụ, yabụ achọrọ nnukwu ihe ndekọ, nke na -ewe nnukwu ego. Ya mere, ewepụtara m nrụpụta dị nro, nke enwere ike ịme naanị dabere na njikwa 5S saịtị. A na -ekewa mmepụta na -adịghị ahụkebe na ngalaba ndị a. Nke mbụ bụ mkpa nyocha saịtị; nke abụọ bụ dabere na saịtị; nke ọzọ bụ lọjistik dabere; na enwere ngalaba ise na mkpokọta, gụnyere ụlọ ọrụ na -adịghị ahụkebe. Ebumnuche bụ imeziwanye arụmọrụ, belata ngwa ahịa, ma bulie usoro nhazi oge niile. Tụkwasị na nke ahụ, ka ọ na -erule 2020, Bureau of Industry and Technology Technology nke ógbè anyị ga -ewebata Internetntanetị ụlọ ọrụ 5G + iji rụkọọ ọrụ na nkwukọrịta. A na -eme pilot mbụ n'ime ụgbọ ala anyịNgwa igwe biomass Kingoro biomassụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ka ọ dị ugbu a, n'ime afọ ọrụ niile na 2020, ngwa ahịa agbadala site na 30%, ụbọchị nnyefe na ọnụego oge izipu ndị ahịa erutela 97%, nke bụ ihe dịka 50%. Ihe kacha mkpa bụ na ụgwọ ọrụ ndị ọrụ arịgoro site na 20%, 20%karịa, uru abawanyela na -adịghị ahụ anya ihe dịka 10%. Ekwesịrị ikwu na emegogogogogogogogogogogogogogogogogogo kachasi elu a na -egosi. Ụdị mmekọrịta na imekọ ihe ọnụ nke ndị mmadụ, ihe onwunwe, na ụlọ ọrụ ndị gbara ya gburugburu na ebe azụmahịa na -adịghị mma.
Oge ezipụ: Apr-07-2021
Onye na -akụ osisi, Ogige osisi Chippers, Pellet igwe na -eri nri anụmanụ, Igwe egweri N'ihi osisi, Belt akwagharị Hammer Mill, Nri anụ ụlọ Pellet Mill,